Waa kee dalka Islaamka ugu wanaagsan caalamka? Muslimiinta ugu badan ee ku nool waddan waa Indonesia, oo ah waddan ay ku nool yihiin 12.7% Muslimiinta adduunka,…
Ciidul Adxaa kee sax ah mise Ciidul Adxaa?
Ciidul-Adxaa sidoo kale waxaa loo higgaadinayaa ’Iid al-Adxa ama Ciidul-Adxa. Inta badan waxaa loogu yeeraa si fudud Ciid. Si kastaba ha ahaatee, Ciiddu waxay sidoo kale tixraaci kartaa ciida kale, Ciidul-Fidriga, oo ka dhacda…
Maxaad dhahdaa marka qof kugu ammaano Islaamka? Si kastaba ha ahaatee, haddii uu qof ku ammaanayo, kaliya ku dheh mahadsanid, oo lagu daro "alhamdulillah"
Jawaab degdeg ah: Khalka khamriga iyo khalka balsamiga ayaa loo tixgaliyaa Xaaraan maadaama ay ku jiraan xaddi badan oo aalkolo ah. Dhammaan noocyada kale ee khalka waxaa loo arkaa Xalaal. Waa…
Quraanku ma xusay dayaxa? Quraanku waxa uu carabka ku adkeeyey in dayaxu yahay calaamada ilaahay ee aanu laftiisu ilaah ahayn. Muxuu Allaah ka yiri dayaxa?...
Saynis yahanadu waxay horumariyeen qaybaha aljabra, kalkulus, joomatari, kimistari, bayoolaji, dawo, iyo xidigiska. Noocyo badan oo farshaxan ah ayaa kobcay xilligii dahabiga ahaa ee Islaamka, oo ay ku jiraan dhoobada, biraha, dunta, iftiinka...
In kasta oo Asaf Jahs (Nizams), taliyayaashii Dawladdii Hyderabad ee hore, ay ahaayeen Muslimiin Sunni ah, haddana waxay sii wadeen ilaalinta xuska Muharram. Waqtigoodii ayey ahayd markii gumeysi gaar ah...
Anaga muslimka ah kuma caabudno sanamka Maka. Xitaa Idol kuma naqaanno. Waa dhagax uu nabi Muxamed Maka ku soo dejiyay ujeedka ugu weyn...
Quraanka kariimka ah (SWT) waxa uu Alle ku sheegay xuquuqda meherku ku leeyahay haweenayda. “Haweenkana meherkooda hadiyad ahaan u sii. Hadda, haddii ay…
Waxay dhaqdhaqaaq diimeed ka soo kicitimeen Dira'iyya Nejd 1744-1745. Caqiidadoodu waxay heshay dad yar oo u naxariista Xijaz, Muftiga Makana wuxuu ku dhawaaqay…
Ma qurxin karaa gurigayga Ramadaanka?
Maxaa masaajid ka dhigaya masaajid?
Maxaa sababa in Islaamku si degdeg ah u fido?
Waa maxay labada qaybood ee Islaamku?
Iibsashada tikidhada bakhtiyaanasiibka ma xaaraan baa Islaamka?
Jawaabta ugu fiican: Ma inaad xidhato xijaab haddii aad bidaar leedahay?